About Us - Ningbo Rykay Electric Co., Ltd.
N ingbo Rykay Electric Co., Ltd. ari specialized mukubudisa Mini firiji & motokari unotonhorera & bhokisi inodziya, chando maker, doro unotonhorera, etc. Tine ruzivo makore anopfuura 16 ari mumunda uyu.
W E makasimbisa-refu uye yakatsiga ukama vakawanda makambani ari mhiri kwemakungwa mabhizimisi, uye vatengi vedu vanogutsikana pakarepo uye nyanzvi mushure-sale basa inopiwa team.The hwakadzama ruzivo yedu Advisory uye parameters zvinogona kutumirwa yedu vatengi yekusimbisa, uye vakasununguka ivhu iripo.
O Ur kambani kuwedzerwa nezvinhu yakatsiga kukura uye kupayona spirit.Our RYKAY muchiso zvemagetsi kutonhora uye kudziyisa Unit, motokari fridges wakaumbwa kwazvo nezvinhu, michina yemhando yepamusoro, anokwezva design, yakatsiga uye hwakavimbika unhu. Shona zviri nyore kutakura pamwe AC / DC simba zvitengeswa. The zvigadzirwa dzakakurumbira muJapan, South Korea, USA, UK, Australia, etc. Our zvinhu vanogamuchirwa zvakanaka kubudikidza vatengi.
Welcome akwegura uye zvitsva vatengi kuti kambani yedu mabhizimisi pamwe.